August 2019 – Allpuntlander.com
Ururka Saxafiyiinta Puntland ee MAP oo Dadaalo badan sameyay aya ugu Danbeyn waxa uu ku Guulaystay in Waqooyiga Gaalkacyo loo Wareejiyo Tababaro Muhiim ah oo Wariyaasha Koonufrta Gaalkacyo loo Qaban Lahaa Tabarkan ayaa Waxa iska Kaashanaya Hay,ado Calami ah iyo Sidoo kale Ururka Saxafiyinta Soomaliyed ee uu Gudoomiye ka yahay Omar Faruk , Waxana Tababaradan Boqolkiiba 5% la siin doona Wariyaasha Koonfurta Gaalkacyo Halka 95% looga Faaideyn doono Wariyaasha Dowlada Puntland Warbaahintada ku Hadlaa Afka Galmudug Gaar ahaan Warbaahinta Hobyomedia.com aya Dabacday Xog ku saabsan in la musuq Maasuqay Tababaro…
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu dilay nin u dhashay dalka Kenya oo u shaqeenayay shirkad kaluumeesi oo magaaladaasi ka shaqeysa. Sida aan wararka ku helnay ninkan Kenyanka ah waxaa dilay askari ka mid ahaa ilaalada shirkada, waxaana la sheegay in ninka la dilay iyo askariga uu soo kala dhax galay murankan sababay dilka. Masuuliyiin katirsan maamulka Puntland gaar ahaan maamulka gobolka Bari ayaa xaqiijiyay dilka loo geestay ninka ajnabiga, waxa ayna masuuliyiinta sheegeen in ay socdaan baaritaano ku aadan dilkan.…
Hoggaamiyaha dhaqaaqa gooni ugoosadka ah ee Yemen, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qeyb galka wada-hadallo Sacuudiga uu marti-gelinayo, kadib markii dagaal uu la galay ciidamada dowladda Yemen taageera, uu tobaneeyo qof ku dilay magaalada Cadan. Aidarus al-Zubaidi oo ah hoggaamiyaha Golaha Ku-meel Gaarka ah ee Koonfureed ee loo soo gaabiyo STC ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xabad-joojin laga hir-geliyo Cadan, halkaasi oo ciidamadiisa ay qabsadeen madaxtooyada iyo xarumaha ciidanka. Ciidamada uu hoggaamiyo Aidarus al-Zubaidi ee doonaya in Koonfurta Yemen ay hesho madaxbanaani ayaa toddobaadkii tagay dagaal xooggan…
Muqaaalo, Wararka Maanta, Wararka PuntlandLeave a comment
Wasaaradda caddaaladda iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Puntland ayaa shaaca ka qaaday inaysan aqbali doonin in xabsiyada Puntland lagu hayo dad dhaafay waqtigii sharciga ahaa si ay caddaalad u helaan muwaadiniinta Puntland. “Aadbaad u mahadsan tahay runtii Rummaanka xoog baan saarnay waxaana isku daynay inaan tirakoob rasmi ah ku samayno dadka mudadodii dhaafay dhammaan Puntland oo dhan, waxaana naloo soo gudbiyey xogta dadka xiran ee muddo dhaafka ah” ayuu yiri wasiir ku-xigeenka caddaaladda Puntland Maxamed Cali Faarax oo arrintaan ka hadlayey. Wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay inay u yeereen dhammaan hay’adaha…
Ciidamada Amniga dowladda Puntland ayaa degmada Badhan ee gobolka Sanaag ku qabtay xubno lagu tuhmayo in ay ka tirsan yihiin malayshiyaadka Al-shabaab oo ku socday buuraleyda Galgala ee gobolka Bari halkaasi oo ciidamada Puntland ay kula dagaallaman kooxo ka tirsan Al-shabaab. Xubnaha la qabtay oo ka soo amba-baxay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa gaarigii ay wateen lagu joojiyay kantaroolka degmada Badhan balse mid kamid ah oo isku dayay in uu cararo ayaa ciidanku toogasho ku dileen halka saddexdii kale oo isdhibayna la qabtay sid ay xaqiijiyeen mas’uuliyiinta degmada…
Taliska Booliiska gobolka Bari ayaa xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay askari saaka magaalada Boosaaso ku dilay nin ajnabiya oo u dhashay waddanka Kenya kadib markii muran soo kala dhexgalay. Asakariga ayaa sida la sheegayo wuxuu ilaalo u ahaa ninka uu dilay oo ka shaqeynayay shirkad Kalluumeysi oo ku taalla magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. “Ciidamadda Amniga ee Magaalada Boosaso ayaa Gacanta ku soo dhigay Ninkii ka danbeeyay dilka muwaadinkii u dhashay dalka Kenya ee Saaka lagu dilay Magaalada Boosaso” ayaa lagu yiri qoraa ka soo baxay taliska Booliiska gobolka Bari.…
Galmudug oo soo saartay amar ku socda shacabka Koonfurta Gaalkacyo (Akhriso)
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa awaamiir dhanka ammaanka la xiriirta ku soo rogay shacabka ku nool gobolka Mudug gaar ahaan Koonfurta Galkacyo. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda aamniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku amray dhammaan dadka rayidka ah ee hubka ku dhex haysta koonfurta magaalada Gaalkacyo inay iska diiwaan geliyaan Wasaaradda amniga si loo xaqiijiyo ammaanka. Hoos ka akhriso qoraalka Shire Garee Wararkeena